အပယျခံတဲ့ စာလုံးပေါငျးလေးကအစ အထီးကနျြစရာ – Shinyoon
အပယျခံတဲ့ စာလုံးပေါငျးလေးကအစ အထီးကနျြစရာ…တဈယောကျတညျးရှိနပေါတယျဆိုတာမြိုးမဟုတျပဲ လူတှအေမြားကွီးရှိရဲ့သားနဲ့မှ ကိုယျတဈယောကျတညျး ဖွဈနတောမြိုးပေါ့ ။ ကိုယျ့အတှကျ စိတျပူပေးတဲ့သူ မဲ့တယျ ဂရုစိုကျပေးမယျ့သူမဲ့တယျ ပွီးတော့ နားလညျပေးမယျ့သူမဲ့တယျ ဒီလိုမဲ့ခွငျးပေါငျးမြားစှာကို တဈစုတဈစညျးတညျး ပွပေးတဲ့စကားလုံးလေးဟာ အပယျခံပါ … တဈနညျးအားဖွငျ့ နောကျတဈမြိုးဖျောပွရရငျ ကြှနျမ ပေါ့ ။
တခွားတဈယောကျနဲ့ ကိုယျ လုပျတဲ့အပွဈခငျြးတူရငျတောငျ ကိုယျက ပိုပွီးဆူခံရတာမြိုးလေ ။ တခွားတဈယောကျနဲ့ ကိုယျ လုပျတဲ့ ကောငျးတဲ့အရာခငျြးတူရငျတောငျ ကိုယျ့ကမြှ မကောငျးပွောခံရတာမြိုးတှေ။ တခွားတဈယောကျနဲ့ နှိုငျးယှဉျပွီး ရှငျသနျနတောမြိုးမဟုတျပမေယျ့ တူညီတဲ့ အရာတှမေရတဲ့အခါ ကိုယျဟာ ဘာလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးမြိုးတှနေဲ့ ဝမျးနညျးခဲ့ရဖူးတယျ ။ ငါ့ကမြှဆိုတဲ့ အတှေးမြိုးနဲ့ အခဈြခံရဖို့ကံပါမလာတဲ့ ကိုယျ့ဘ၀ကိုယျလဲ တဈခါတဈရံတော့ မုနျးမိပါတယျ ။ တကယျပဲ ကြှနျမက အပယျခံလား ။
ဘယျလောကျပဲ ကောငျးဖို့ကွိုးစားကွိုးစားပါ … အားပေးစကားတှေ တဈခါမှ မကွားခဲ့ရဖူးဘူး ဘယျလောကျပဲ လုပျပေးခဲ့ လုပျပေးခဲ့ပါ အကောငျးတဈခါမှ အပွောမခံရဖူးဘူး … ကြှနျမတဈနရောရာမှာ အရေးပါခငျြတယျ ဒါမှမဟုတျ ကြှနျမလဲ ဂရုစိုကျခံခငျြတယျ ။ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှဟော အေးခမျြးတယျတဲ့ ခဈြခွငျးမခံရတဲ့ ကြှနျမဘဝတှမှော အေးခမျြးမှုတှထေကျ အဝေးထှကျပွေးသှားခငျြတဲ့ စိတျတှပေဲ ရှိတယျ ။
တဈနကေ့ရြငျတော့ ကိုယျ့ကို နားလညျမှာပါဆိုတဲ့စိတျနဲ့ရပျနပေမေယျ့လညျး ကိုယျ့စိတျကို နားလညျပေးဖို့နနေသောသာ ကိုယျပွောတဲ့စကားလုံးတှကေိုတောငျ နားလညျမပေးနိုငျတဲ့အခါ …ကြှနျမ မကျြရညျတှပေဲ ကရြပါတယျ ။ အရငျးနှီးဆုံးအရပျက ကိုယျနဲ့အစိမျးဆုံးဖွဈနတေဲ့အထိ ကြှနျမက တဈသီးပုဂ်ဂလဆနျပါတယျ ဒီအကွောငျးတှေ ပွောပွပွီး ငိုပွဖို့ အဖျောကောငျးတှဆေိုတာလဲ မဲ့တယျ ကြှနျမ နာကငျြနပေမေယျ့ ကိုယျပေါငျကိုယျလှနျထောငျးမယျ့အဖွဈမြိုးတှလေဲ ရှောငျပါတယျ ။
ကိုယျအတတျနိုငျဆုံး ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့လဲ မှေးကတညျးက ဂရုစိုကျခံရခွငျးကံတှဟော မဲ့ပါတယျ ။ မကျြရညျကတြဲ့အခါ ငိုပွနျပွီလားဆိုတဲ့ အပွဈတငျခံရမှာလဲ ကွောကျတယျ ။ ပငျပနျးနပေါပွီလို့ပွောပွီး လှညျ့ထှကျသှားဖို့ကပြွနျတော့လဲ စိတျတှမေပွတျနိုငျခဲ့တာ ခကျတယျ ။ တဈနကေ့ရြငျတော့ နားလညျလာမှာပါလို့တှေးပမေယျ့ အခုနရေ့ကျတိုငျးဟာ အရငျးနှီးဆုံးအရပျမှာနရေငျး ကိုယျတကယျတဈယောကျတညျး အထီးတှကေနျြတယျ ။
အပယျခံ …. တဲ့ ကိုယျ့ဘကျက ပွနျပွီး ပဈပယျမထားနိုငျခဲ့တာက ကိုယျ့ရဲ့ကံပေါ့ ။
အပယ်ခံတဲ့ စာလုံးပေါင်းလေးကအစ အထီးကျန်စရာ…တစ်ယောက်တည်းရှိနေပါတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲ လူတွေအများကြီးရှိရဲ့သားနဲ့မှ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့ ။ ကိုယ့်အတွက် စိတ်ပူပေးတဲ့သူ မဲ့တယ် ဂရုစိုက်ပေးမယ့်သူမဲ့တယ် ပြီးတော့ နားလည်ပေးမယ့်သူမဲ့တယ် ဒီလိုမဲ့ခြင်းပေါင်းများစွာကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ပြပေးတဲ့စကားလုံးလေးဟာ အပယ်ခံပါ … တစ်နည်းအားဖြင့် နောက်တစ်မျိုးဖော်ပြရရင် ကျွန်မ ပေါ့ ။
တခြားတစ်ယောက်နဲ့ ကိုယ် လုပ်တဲ့အပြစ်ချင်းတူရင်တောင် ကိုယ်က ပိုပြီးဆူခံရတာမျိုးလေ ။ တခြားတစ်ယောက်နဲ့ ကိုယ် လုပ်တဲ့ ကောင်းတဲ့အရာချင်းတူရင်တောင် ကိုယ့်ကျမှ မကောင်းပြောခံရတာမျိုးတွေ။ တခြားတစ်ယောက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ရှင်သန်နေတာမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် တူညီတဲ့ အရာတွေမရတဲ့အခါ ကိုယ်ဟာ ဘာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေနဲ့ ဝမ်းနည်းခဲ့ရဖူးတယ် ။ ငါ့ကျမှဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးနဲ့ အချစ်ခံရဖို့ကံပါမလာတဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်လဲ တစ်ခါတစ်ရံတော့ မုန်းမိပါတယ် ။ တကယ်ပဲ ကျွန်မက အပယ်ခံလား ။
ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းဖို့ကြိုးစားကြိုးစားပါ … အားပေးစကားတွေ တစ်ခါမှ မကြားခဲ့ရဖူးဘူး ဘယ်လောက်ပဲ လုပ်ပေးခဲ့ လုပ်ပေးခဲ့ပါ အကောင်းတစ်ခါမှ အပြောမခံရဖူးဘူး … ကျွန်မတစ်နေရာရာမှာ အရေးပါချင်တယ် ဒါမှမဟုတ် ကျွန်မလဲ ဂရုစိုက်ခံချင်တယ် ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေဟာ အေးချမ်းတယ်တဲ့ ချစ်ခြင်းမခံရတဲ့ ကျွန်မဘဝတွေမှာ အေးချမ်းမှုတွေထက် အဝေးထွက်ပြေးသွားချင်တဲ့ စိတ်တွေပဲ ရှိတယ် ။
တစ်နေ့ကျရင်တော့ ကိုယ့်ကို နားလည်မှာပါဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရပ်နေပေမယ့်လည်း ကိုယ့်စိတ်ကို နားလည်ပေးဖို့နေနေသာသာ ကိုယ်ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကိုတောင် နားလည်မပေးနိုင်တဲ့အခါ …ကျွန်မ မျက်ရည်တွေပဲ ကျရပါတယ် ။ အရင်းနှီးဆုံးအရပ်က ကိုယ်နဲ့အစိမ်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့အထိ ကျွန်မက တစ်သီးပုဂ္ဂလဆန်ပါတယ် ဒီအကြောင်းတွေ ပြောပြပြီး ငိုပြဖို့ အဖော်ကောင်းတွေဆိုတာလဲ မဲ့တယ် ကျွန်မ နာကျင်နေပေမယ့် ကိုယ်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းမယ့်အဖြစ်မျိုးတွေလဲ ရှောင်ပါတယ် ။
ကိုယ်အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်လဲ မွေးကတည်းက ဂရုစိုက်ခံရခြင်းကံတွေဟာ မဲ့ပါတယ် ။ မျက်ရည်ကျတဲ့အခါ ငိုပြန်ပြီလားဆိုတဲ့ အပြစ်တင်ခံရမှာလဲ ကြောက်တယ် ။ ပင်ပန်းနေပါပြီလို့ပြောပြီး လှည့်ထွက်သွားဖို့ကျပြန်တော့လဲ စိတ်တွေမပြတ်နိုင်ခဲ့တာ ခက်တယ် ။ တစ်နေ့ကျရင်တော့ နားလည်လာမှာပါလို့တွေးပေမယ့် အခုနေ့ရက်တိုင်းဟာ အရင်းနှီးဆုံးအရပ်မှာနေရင်း ကိုယ်တကယ်တစ်ယောက်တည်း အထီးတွေကျန်တယ် ။
အပယ်ခံ …. တဲ့ ကိုယ့်ဘက်က ပြန်ပြီး ပစ်ပယ်မထားနိုင်ခဲ့တာက ကိုယ့်ရဲ့ကံပေါ့ ။